အောက်တိုဘာ လကုန်ပိုင်းကစပြီး အခြေခံပညာကျောင်းများပြန်ဖွင့်ရန် စီစဉ်နေ - Myanmar People Alliance
အောက်တိုဘာ လကုန်ပိုင်းကစပြီး အခြေခံပညာကျောင်းများပြန်ဖွင့်ရန် စီစဉ်နေ
ယမန်နေ့ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ကိုဗစ်ကူးစက်မြန်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း
အစည်းအဝေးက အောက်တိုဘာလ ကျောင်းပိတ်ရက်ရှည် ကာလအလွန်မှာ ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချိန်ကာလမှာ ကိုဗစ်ရောဂါပိုး ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုနှုန်းမှာ ယခင်ကလောက် မပြင်းထန်တော့ပဲ ရောဂါပိုး
ကူးစက်မှုရာခိုင်နှုန်းက ၈ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိ ကျဆင်းလာတဲ့အတွက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများရဲ့ စာသင်နှစ် ၁ နှစ် နစ်နာမှုမရှိစေရေး အမြန်ဆုံးကျောင်းပြန်လည် တက်ရောက်နိုင်ရန် စဉ်းစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းက အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာမှာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကို ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်မှုမခံရစေဖို့နဲ့ ကျန်းကျန်းမာမာဖြင့် စာပေသင်ကြားနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး
အောက်တိုဘာလ ကျောင်းပိတ်ရက်ရှည် ကာလအလွန်မှာ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်အောင် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။” ၎င်းက ထပ်မံပြောပါတယ်။ ယင်းကဲ့သို့ စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာမှာ အခြေခံပညာအလယ်တန်းနဲ့ အထက်တန်းအဆင့် ကျောင်းသား၊
ကျောင်းသူများအားလုံးကို ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝ ထိုးနှံပေးသွားရန်လိုကြောင်း၊ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးစီးမှသာလျှင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ မိဘများနဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမများ အပြန်အလှန် ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် ပညာသင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုလုပ်ငန်းများ အမြန်ဆုံးပြီးမြောက်အောင်မြင်ရေးနှင့် စာရင်းဇယားများ မှန်ကန်စေရေးတို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆွေးနွေးပေးသွားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ HaHa ပေါင်းမရေမတွက်နိုင်စွာဖြင့် ခရက်ဒစ်.
အစညျးအဝေးက အောကျတိုဘာလ ကြောငျးပိတျရကျရှညျ ကာလအလှနျမှာ ကြောငျးမြား ပွနျလညျဖှငျ့လှဈနိုငျရနျ ဆောငျရှကျလကျြရှိတယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ယခုအခြိနျကာလမှာ ကိုဗဈရောဂါပိုး ကူးစကျပွနျ့ပှားမှုနှုနျးမှာ ယခငျကလောကျ မပွငျးထနျတော့ပဲ ရောဂါပိုး
အောကျတိုဘာလ ကြောငျးပိတျရကျရှညျ ကာလအလှနျမှာ ပွနျလညျဖှငျ့လှဈနိုငျအောငျ ဆှေးနှေးဆောငျရှကျလကျြရှိပါတယျ။” ၎င်းငျးက ထပျမံပွောပါတယျ။ ယငျးကဲ့သို့ စာသငျကြောငျးမြား ပွနျလညျဖှငျ့လှဈရာမှာ အခွခေံပညာအလယျတနျးနဲ့ အထကျတနျးအဆငျ့ ကြောငျးသား၊
ကာကှယျဆေးထိုးနှံမှုလုပျငနျးမြား အမွနျဆုံးပွီးမွောကျအောငျမွငျရေးနှငျ့ စာရငျးဇယားမြား မှနျကနျစရေေးတို့အတှကျ သကျဆိုငျရာကဏ်ဍအလိုကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျဆှေးနှေးပေးသှားရနျ လိုအပျကွောငျး ၎င်းငျးကပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ HaHa ပေါငျးမရမေတှကျနိုငျစှာဖွငျ့ ခရကျဒဈ.
← ယနေ့မှာကျရောက်တဲ့ ချောရတနာရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ ဟိုအရင်တစ်ချိန်က အမှတ်တရပုံရိပ်တွေနဲ့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ညီညီမောင်
ဖခင်မရှိတော့တဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက် ရပ်တည်နိုင်ဖို့ စီးပွားရေးတစ်ခု စတင်လိုက်တဲ့ မေမေ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း →